बिश्वलाई नेपालको बारेमा के थाहा छ ? भिडियाे रिपाेर्ट - Everest Dainik - News from Nepal
बिश्वलाई नेपालको बारेमा के थाहा छ ? भिडियाे रिपाेर्ट
नेपाली हुनु र नेपाली भएर नेपालमा जन्मिनुमा गर्भ लाग्नु स्वभाविक हाे , तर, बिश्व मानव जातिलाई नेपालको बारेमा कस्लाई के थाहा छ ? हङकङमा एक नेपाली महिलाले गरेकाे भिडियो रिपोर्ट ।
नेपाली हुनु र नेपाली भएर नेपालमा जन्मिनुमा हामिलाई गर्भ लाग्छ नै, तर, बिश्व मानव जातिलाई हाम्रो देश नेपालको बारेमा कस्लाई के थाहा छ?? हेर्नुहोस Hongkong मा एक नेपाली महिलाले गरिएको भिडियो रिपोर्ट ।
Posted by मेरी आमा डट् कम on 21 ನವೆಂಬರ್ 2017
याे पनि पढ्नुस नेपाल र अष्ट्रियाबीच द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर